အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကလေးရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အတိတ်အကြောင်းကို ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီ – Suehninsi
မယ်လိုဒီနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသာကောင်းတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြတ်စဲမှုသတင်းကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒီသတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့မယ်လိုဒီကိုတော့ ပရိသတ်တချို့က ဖေးမအားပေးခဲ့ကြသလို
မယ်လိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပုတ်ချတဲ့သတင်းတွေလည်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ မယ်လိုဒီဘက်က စပြီးဖောက်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအပြင် အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်း စတဲ့အပုတ်ချပြောဆိုမှုတွေ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မယ်လိုဒီကတော့
“အကောင့်တုတွေနဲ့ pageမှာ မကောင်းတာတွေ ဝင်မရေးပါနဲ့ရှင်ကျွန်မမှာ အရင်က သား ဖြစ်ဖြစ် သမီး ဖြစ်ဖြစ် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖုံးဖိထားလို့ရမယ်ထင်လား… ဒါကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်အကုသိုလ်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာဘဲ စီးမြောမနေကြပါနဲ့…. အနာဂတ်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့လေးစားတန်ဖိုးထား ချစ်တတ်မယ့်
သိဒ္ဓိစစ် Siddhi Sittလေးကိုဘဲ မျှော်မှန်းမေတ္တာပို့ကာ အချစ်တွေစုထားကြပါနော်” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တဲ့အပြင် တကယ် ကလေးသာရှိခဲ့ရင် သူနဲ့အနည်းဆုံး(၅၀) ရာခိုင်နှုန်းတော့တူမယ့် ကလေးရဲ့ ပုံစံကိုလည်း အရွှန်းဖောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မယ်လိုဒီကတော့ လတ်တလောမှာ လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့
သားလေးသိဒ္ဓိစစ်နဲ့အတူ ဘုရား၊တရားတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်နေပြီး ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ပူပန်မနေရအောင် လတ်တလောထွက်နေတဲ့ သတင်းတွေက အပုတ်ချထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်မဟုတ်ကြောင်း ဖြေရှင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မယ်လိုဒီရေးသားမျှဝေခဲ့တာလေးတွေကို ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မယျလိုဒီနဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုသာကောငျးတို့ရဲ့အိမျထောငျရေးပွတျစဲမှုသတငျးကိုတော့ လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက ပရိသတျတှလေညျး သိရှိပွီး ဖွဈမှာပါ။ ဒီသတငျးထှကျပျေါပွီးနောကျပိုငျးမှာ တဈယောကျတညျးဖွဈသှားတဲ့မယျလိုဒီကိုတော့ ပရိသတျတခြို့က ဖေးမအားပေးခဲ့ကွသလို
မယျလိုဒီနဲ့ပတျသကျပွီး အပုတျခတြဲ့သတငျးတှလေညျး လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပါတယျ။ မယျလိုဒီဘကျက စပွီးဖောကျပွနျတဲ့သတငျးတှအေပွငျ အရငျအိမျထောငျနဲ့ သမီးလေးတဈယောကျရှိတဲ့အကွောငျး စတဲ့အပုတျခပြွောဆိုမှုတှေ ပြံ့နှံ့လကျြရှိပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မယျလိုဒီကတော့
“အကောငျ့တုတှနေဲ့ pageမှာ မကောငျးတာတှေ ဝငျမရေးပါနဲ့ရှငျကြှနျမမှာ အရငျက သား ဖွဈဖွဈ သမီး ဖွဈဖွဈ ရှိခဲ့မယျဆိုရငျ ဖုံးဖိထားလို့ရမယျထငျလား… ဒါကွောငျ့စိတျကူးယဉျအကုသိုလျဇာတျလမျးတှဲထဲမှာဘဲ စီးမွောမနကွေပါနဲ့…. အနာဂတျမှာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအပွညျ့နဲ့လေးစားတနျဖိုးထား ခဈြတတျမယျ့
သိဒ်ဓိစဈ Siddhi Sittလေးကိုဘဲ မြှျောမှနျးမတ်ေတာပို့ကာ အခဈြတှစေုထားကွပါနျော” ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့တဲ့အပွငျ တကယျ ကလေးသာရှိခဲ့ရငျ သူနဲ့အနညျးဆုံး(၅၀) ရာခိုငျနှုနျးတော့တူမယျ့ ကလေးရဲ့ ပုံစံကိုလညျး အရှနျးဖောကျခဲ့ပါသေးတယျ။ မယျလိုဒီကတော့ လတျတလောမှာ လိမ်မာရေးခွားရှိတဲ့
သားလေးသိဒ်ဓိစဈနဲ့အတူ ဘုရား၊တရားတှေ ပိုလုပျဖွဈနပွေီး ခဈြရတဲ့ပရိသတျတှစေိတျပူပနျမနရေအောငျ လတျတလောထှကျနတေဲ့ သတငျးတှကေ အပုတျခထြားတဲ့သတငျးဖွဈပွီး အမှနျတကယျမဟုတျကွောငျး ဖွရှေငျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မယျလိုဒီရေးသားမြှဝခေဲ့တာလေးတှကေို ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။